Iyadoo qayb ka ah dib-u-habaynta lycée, waxbaridda aasaaska IT waxay qaadataa meel muhiim ah. Markaa laga bilaabo fasalka Seconde guud iyo teknolojiyadda, waxbarid cusub, Sayniska Dijital ah iyo Farsamada, waa la heli karaa dhammaan.
Sidee loo caawin karaa macalimiinta SNT? Aqoontee la wadaaga iyaga? Waa kuwee agabka la dooranayo? Xirfado noocee ah ayay tahay inay siiyaan si ay u bixiyaan waxbarashadan cusub?
MOOC-daan waxay ahaan doontaa qalab tababar oo xoogaa gaar ah : meel bannaan oo ka mid ah la wadaago iyois caawinta, halkaas oo mid kasta iyo qof kastaa uu dhisi doono koorsadiisa hadba baahida iyo aqoonta uu u baahan yahay, koorsada internetka oo kobcin doonta waqti ka dib; Waxaan bilownaa markaan rabno oo aan soo laabanno inta aan u baahanahay.
Kooraskan ujeedadiisu waa Bixi shuruudaha iyo agabka bilowga ah si aad u bilowdo hawlaha SNT ardayda dugsiga sare iyada oo la xidhiidha mawduucyada 7 ee barnaamijka. Xiritaanka maaddooyinka dhowr ah oo si qoto dheer loo baran karo iyo waxqabadyada furaha ayaa la soo bandhigi doonaa. MOOC waxay u timaadaa inay caawiso oo ay dhamaystirto tababarka lagama maarmaanka u ah waxbarashadan uu bixiyo nidaamka waxbarashada qaranka.
S ee Sayniska: Ogow sayniska kombiyuutarka iyo aasaaskiisa. Waxaan halkan ka bilaabeynaa male-awaalka (runta dhowr sano) in ku dhawaad ​​qof kastaa ogyahay isticmaalka habaynta xogta laakiin maxaan ka ognahay codeynta macluumaadka, algorithms iyo barnaamijyada, nidaamyada dhijitaalka ah (shabakadaha, database-yada)? Ma u malaynaysaa inaadan waxba garanayn ama wax walba taqaan? Kaalay iska hubi oo arag sida loo heli karo!
N for Digital: Digital sida dhaqanka, saamaynta dhabta ah. Abuurka dhaqanka sayniska si ay u ogaadaan tignoolajiyada dhijitaalka ah iyo cilmiga ay ku leedahay dunida dhabta ah, oo ku saabsan toddobada mawduuc ee barnaamijka. Marka la eego nolol maalmeedka dhalinyarada, tus halka ay ku yaalaan nidaamyada dhijitaalka ah, xogta iyo algorithms ee nagu wareegsan, waxa ay yihiin sida saxda ah. Faham isbeddellada iyo saamaynta bulsho ee ka dhasha, si aad u aqoonsato fursadaha iyo khataraha labadaba (tusaale: dad badan, xidhiidh bulsho oo cusub, iwm.) kuwaas oo hor yaal iyaga iyo iyaga.
READ Hordhac Power BI Desktop
T ee Tignoolajiyada: La wareeg qalabka abuurka dhijitaalka ah. Si ay naftooda ugu qalabeeyaan si ay u taageeraan ardayda horumarinta xirfadaha la beegsanayo, iyada oo la abuurayo walxo dhijitaalka ah (website-yada isdhexgalka, walxaha ama robots, codsiyada casriga ah, iwm), isticmaalaya software iyo barnaamijka bilowga ah ee Python.
Maxaa dhacaya haddii aan qaato ICN MOOC?
Ogsoonow in: qaybta S ee SNT MOOC waxay qaadanaysaa cutubka I (IT iyo aasaaskeeda) ee ICN MOOC (marka waa inaad xaqiijisaa su'aalaha, adoon daruuri la tashan fiidiyowyada iyo dukumentiyada mar kale); Nuxurka cutubka N ee MOOC ICN waxa loo isticmaalaa sidii xubno dhaqameed qayb N ee MOOC SNT taasoo si kastaba ha ahaatee cusub oo la qabsanaysa barnaamijyada cusub, sida qaybta T ee MOOC SNT.
Baro wax ku saabsan baridda Sayniska Dijital ah iyo Tignoolajiyada Diisambar 13, 2021Tranquillus
horeBachelors of Business Schools
socdaFiisigiska guud ee bilowga wanaagsan ee tacliinta sare